Linii - သဘာဝပိုးသတ်ဆေး - Huon Pine Products တက်စမေးနီးယား
Huon Pine အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေပါ.
၎င်းသည်အချိန်မရွေး Tasmanian လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်.
ဒါဟာ silverfish တွန်းလှန်ရန်အသုံးပြုသည်
ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ၀ ယ်ပါ
အန္တရာယ်ကင်း - အလွန်ကောင်းသည်, အဆိပ်မဟုတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများ. huon ထင်းရှူး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများပါဝင်သည်, အာရဇ်ပင်, lemongrass နှင့်စန္ဒကူး.
တာဝန်ရှိသည် - Linii Tasmania သည် Innovative Environment Award ကိုရရှိခဲ့သည် 2016 Native Forest Timber Industry မှဖန်တီးပြီးအလွန်ထိရောက်မှုမရှိသောလောင်ကျွမ်းနေသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်. Huon Pine စုဆောင်းမှုအားလုံးသည်သစ်များမှသာရရှိပြီး Linii Tasmania သည်ယခုအချိန်အထိဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည် 20 ရှိပြီးသားထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများမှစွန့်ပစ်တန်ချိန်.
ထုပ်ပိုးမှုအားလုံးကိုသြစတြေးလျပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှဝယ်ယူသည်, ပြန်လည်အသုံးပြုထုပ်ပိုးသည့်နေရာကိုဖြစ်နိုင်သမျှအသုံးပြုပြီးသတ်မှတ်ထားသောကာဗွန်ကြားနေပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည် 90% ဖောက်သည်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏.
စစ်ဆင်ရေး, Linii Tasmania သည်၎င်း၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုပြုလုပ်သည်, နှင့်ဆုပေးပါသည်, အနောက်အနောက်ကမ်းခြေရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်ရေရှည်တည်တံ့။ ပျော်စရာကောင်းသောအလုပ်များ.
ထုတ်လုပ်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Range ကိုကြည့်ပါ
100ml ကို Huon ထင်းရူးမြူခိုး
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.90 ထဲက 5
70gm Huon ထင်းရူးဗီရိုအိတ်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.93 ထဲက 5
160gm ကော်ဇောအမြင်ကြည်လင်စေရန် Shake နှင့် Vac
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.83 ထဲက 5
Huon ထင်းရူး SMALL အိပ်ရာခွေးပွညျ့
$5.00 ပုံသေနှုန်းထားသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းသြစတြေးလျ WIDE
ငါမဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် AGHA ရှိုးမှာသငျသညျကိုမွငျလြှငျ .. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာရောက်ရှိမှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်း cant.
Pierre ၏ Clifford
ငါဒေသခံပြတိုက်လာရောက်လည်ပတ်သောအခါငါကုန်ပစ္စည်းယူဆောင်. ဒါကြောင့်ငါကပိုယူဆောင်ဆန္ဒရှိ Love. 🙂
လုလင်ပျိုထွက်ပြိုင်ပွဲနှင့်ကသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်တချို့ Linii get အလုံအလောက်ငါစားစရာခန်းနှင့် Presto အချို့ Linii ထားစားစရာခန်းပိုးနှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားစစ်တိုက်သည်၎င်း၏စင်ကြယ်သော magic.After ကအကြံပြုနိုင်ဘူး ! သူတို့နေဆဲဒီထုတ်ကုန်သည်မည်မျှကောင်းသောမယုံနိုငျပဲက၎င်း၏ကတခြား applications.Its အကြောင်းကိုသဘောသဘာဝဝှက်ထားသောဥစ္စာ၏အမှန်တကယ်တဦးတည်းငါအပ်နိုင်မည်ဆို home.Wish များအတွက်မဖြစ်မနေသင်ယူတာအရမ်းများနှင့်ယခုအကြီးအနံ့ပျောက်ကွယ်သွားပြီ 10 ကြယ်များ!!
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးတွေအများကြီးပြန်ဆိုင်ဖို့ ago.Been လအနည်းငယ်ဝယ်နှငျ့အခြို့ကပိုတယ်. တောင်မှမိခင်တချို့တယ်.
ကျနော်တို့လအနည်းငယ်အကြာဒီထုတ်ကုန်အချို့ကိုဝယ်ယူ. အဲဒါကိုမလုပ်ပဲအရာအားလုံးကိုပြုတော်မူပြီ. ဝယ်လွယ်ကူပြီးစာပို့ခမြန်ဆန်ကောင်းစွာချိုခဲ့.
သငျသညျယောက်ျားတွေဂုဏ်န W.A ပိုမိုရောင်းသူရှိတဲ့အခါ
ထူးဆန်းသော! ကြှနျတေျာ့ခွေးပေါက်စအိပ်ရာနှင့်သူမသည်ကော်ဇောပေါ်နည်းနည်းမတော်တဆမှုရှိပါတယ်သည့်အခါထိုသို့အသုံးပြုခြင်း ... အနံ့ကိုချစ်! ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်🙂
ပေါ်အခြေခံကာ 33 သုံးသပ်ချက်များ
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဗီရိုအတွက် Huon Pine ဘောလုံးဟု ယူဆရသည့်အရာကို ဝယ်ယူပြီး လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ -3ရက်သတ္တပတ်အကြာ - ရနံ့မပါသော လွှစာပလပ်စတစ်အိတ်. ဒေါသထွက်ပြီး အသုံးမကျဘူး။. ပေးထားသော ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ကျေနပ်စွာ မခံစားနိုင်ပါ။. ပြန်အမ်းငွေတောင်းမယ်။.
20:43 08 ဒီဇင်ဘာ 21
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှု. ပိုးမွှားများထက်အမွှေးအကြိုင်ပိုကောင်းသောအရာနှင့် bug မ်ားအားဝေးဝေးသွားစေသည်
01:24 21 မတ် 20
ငါ Huon Pine Mist ကိုဝယ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏စာအုပ်စင်များအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည် (ဒါပေမယ့်လည်းတခြားနေရာ) ငါ့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုစားကောင်းစားနိုင်မယ့် silverfish နဲ့တခြားသေးငယ်တဲ့ဝေဖန်သူတွေကိုရှောင်ရှားဖို့. ဒါဟာလှပတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ, တာရှည်ခံသော, နှင့် Tasmania သို့ငါ့လည်ပတ်မှုငါ့ကိုသတိပေးတဲ့အံ့သြဖွယ်အနံ့နှင့်အတူ. သူတို့ရဲ့အခြားထုတ်ကုန်များဝယ်ယူရမည်, အရမ်း. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Linii, သင့်ရဲ့ကြီးမြတ်စိတ်ကူးသည်, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တာဝန်ရှိထုတ်ကုန်.
S L ကိုဘွန်း
10:13 27 ဇန်နဝါရီ 20
08:59 26 ဇွန် 19
ဂရိတ်ဝန်ဆောင်မှု & Fantastic ထုတ်ကုန်
M က Smith & သားတော် Earthmoving
03:30 19 ဒီဇင်ဘာ 18
08:52 19 စက်တင်ဘာ 18
ငါကျွန်းကနေလာမှအထူးသဖြင့်လုပ်သြစတြေးလျလုပ်ဝယ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ် (ဝမ်းနည်းပါတယ်) တစ်ခါတစ်ရံမေ့လျော့နိုင်ပါသည်. ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် range ကိုမှဘာမှမလိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင့်ကိုယောက်ျားတွေမှတ်မိစေလိမ့်မည်။ သင်ကဲ့သို့ကောင်းသောအလုပ်မျိုးလုပ်သည်. ဆက်လက်ပြီးရှိသည်.
02:17 19 စက်တင်ဘာ 18
00:48 31 Augဂုတ် 18
21:42 30 Augဂုတ် 18
21:12 30 Augဂုတ် 18
အလွန်ကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသည်အထူးအကြံပြုလိုသည်
13:38 30 Augဂုတ် 18
ငါဟာစိတ်အားထက်သန်တဲ့စက်ဘီးစီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအဝတ်အစားအတွက်ငွေအများကြီးသုံးတယ်. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပိုးရွမှတွင်းပေါက်အသစ်တစ်ခုကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်လွန်စွာစိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်, အသုံးမပြုရသေးသော merino arm warmers များ ... ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏ c ၌ဗျူဟာမြောက်ထားသည့် Linii အိတ်ရှိသည်,ဒီဗီရိုနဲ့ကျွန်မရဲ့အဝတ်အစားတွေအားလုံးကိုဒီနှစ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်. s သင်၏စျေးကြီးသောအဝတ်ကိုကာကွယ်ခြင်းအတွက်ပေးချေရန်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်း.
10:19 30 Augဂုတ် 18
09:54 30 Augဂုတ် 18
09:32 30 Augဂုတ် 18
ငါ Joris ကိုသိတယ်, ဖန်တီးသူ, သူသည်မိမိအ Linni ခရီးစတင်ကတည်းက. သင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအသည်းအသန်ရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, စစ်မှန်သည်, ပတ်ပတ်လည်သိကောင်းစရာများနှင့်စစ်မှန်တဲ့လူကြီးလူကောင်း. ဤဂုဏ်ရည်တော်များကိုလှပစွာတင်ဆက်ထားပြီးအလွန်ထိရောက်ပြီးပိုမိုထိရောက်သောသူ၏ထူးခြားသော Tasmanian Linii ထုတ်ကုန်များသို့မေတ္တာဖြင့်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်. Tasmania ၏ ဦး ထုပ်ကိုဆွဲနိုင်သည့်နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်.
08:28 30 Augဂုတ် 18
ဂရိတ်ထုတ်ကုန်. ဒါဟာသဘာဝကတကယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါ. ကျိန်းသေအကြံပြုလိမ့်မယ်!
07:50 30 Augဂုတ် 18
အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များနှင့်အနံ့ divine.The ရေမှုန်ရေမွှားနှင့်တံခါးကိုပိတ်ထားအံ့သြဖွယ်များနှင့်မကြာသေးမီကဆပ်ပြာကြိုးစားခဲ့ .... စိတ်ကူး. အံဆွဲထဲမှာ Sachets ကအဝတ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အနံ့ဖြစ်စေသည်။ အလုပ်ကောင်း Joris, ကောင်းသောအလုပ် xx တက်ထားပါ
07:48 30 Augဂုတ် 18
07:38 30 Augဂုတ် 18
ဒီထုတ်ကုန်ကိုချစ်. ရနံ့ကအံ့သြစရာကောင်းတယ်. ငါတစ်ခုချင်းစီကိုမော်တော်ယာဉ်အတွက်တ ဦး တည်းရှိသည်.
07:28 30 Augဂုတ် 18
07:08 30 Augဂုတ် 18
06:58 30 Augဂုတ် 18
Linii သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးအိမ်ကိုအမှန်တကယ်လန်းဆန်းစေသည်. bug များနှင့်အနံ့များကိုကောင်းမွန်သောသဘာဝဖြေရှင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
06:49 30 Augဂုတ် 18
ကျွန်ုပ်မှာယူပြီးနောက်မှာကုန်ပစ္စည်းကိုမြန်မြန်ရခဲ့တယ်. အရမ်းကောင်းတယ်! ငါ့မှာရှိတယ် 1 ငါ၏အအားကစားဖိနပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် sachet. ဘယ်ခြားနားချက်လဲ.
06:38 30 Augဂုတ် 18
ကျနော်တို့ Linii လုံးဝချစ်. သင့်ရဲ့ဗီရိုအတွက်အထူးအကြံပြုလိုတယ်, သိုလှောင်မှု, ခွေးကုတင်. အိမ်ထောင်စုတိုင်းလိုအပ်သောလှပသော Tasmanian ထုတ်ကုန်.
06:35 30 Augဂုတ် 18
ထုတ်ကုန်ကိုချစ်, အမှန်တကယ် Tasmania အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏
06:51 19 မေလ 18
Joris သည် Tasmania နှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်ကုန်များကိုဤနေရာတွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်. သူ၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ခြင်းသည်ထိုအထောက်အထားများဖြင့်သာလာသည်မဟုတ်ဘဲရိုးသားမှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုအောင်မြင်နိုင်သည်ဟုသူယုံကြည်သည်။.
02:00 28 ဇန်နဝါရီ 18
ငါ Linii ထုတ်ကုန်ကြီးမြတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တာဝန်ရှိထုတ်ကုန်များစွာ၏စစ်မှန်သော & ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်. ဤထုတ်ကုန်များသည်သူတို့၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီအသက်ရှင်သည်, စျေးနှုန်းချိုသာပြီး ၀ ယ်ယူသူများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်. အထူးအကြံပြုချက်များ.
23:19 25 ဇန်နဝါရီ 18
အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသဘာဝကျသည့်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ သူ့လက်ရာများကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသူတစ် ဦး မှတီထွင်သည်။ .
07:29 25 ဇန်နဝါရီ 18
ငါ Linii ထုတ်ကုန်စိတ်ကူးဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်. ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်များသည်ဖော်ပြချက်နှင့်အညီနေထိုင်ပြီး၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုကျေနပ်စွာပြည့်စုံစေခဲ့သည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး Linii ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူကတည်းက, ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်စုသည်အခြားထုတ်ကုန်များကိုမည်သည့်အခါကမျှမကြည့်ရှုခဲ့ပါ. ကျနော်တို့က Jute Bags တချို့နဲ့စခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး Door Snake နဲ့ Dog Mats ကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်. ကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိ5ကြယ်များ
04:02 25 ဇန်နဝါရီ 18
ငါတို့မိသားစုသည် Huon ထင်းရှုးအခိုးအငွေ့ကိုအိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လေထုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ကော်ဇောနှင့်ထည် deodorant အဖြစ်အသုံးပြုသည်. ပက်ဖြန်းထားသောအခန်းထဲသို့ ၀ င ်၍ Huon pine ပင်၏အရနံ့ကိုအနံ့ရစေခြင်းကဲ့သို့ဘာမျှမရှိပါ. ၎င်းသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း၏အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုးမွှားများနှင့် / သို့မဟုတ် Silverfish မျာကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီရိုများတွင်ကြိတ်ခွဲထားသောကြိတ်ခွဲထားသော Huon ထင်းရှူးရှပ်များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။. အဲဒါကိုသုံးပြီးကတည်းကဒီနေရာတွေမှာမလိုချင်တဲ့ guests ည့်သည်တွေမရှိခဲ့ဘူး. (ရုံချစ်စရာကောင်းတဲ့အနံ့). ကျွန်ုပ်အခွင့်အလမ်းရတိုင်းကျွန်ုပ်၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုဤမျှလောက်ကောင်းသောထုတ်ကုန်ကိုမျှဝေရန် Linii Tasmania ထုတ်ကုန်များကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည်.
01:20 25 ဇန်နဝါရီ 18
ကျွန်ုပ်သည်မလေးရှားကိုသီးသန့်ဖြန့်ဖြူးသူပါ, Linii Tasmania သည်အလွန်ကြီးကျယ်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်, ၎င်းသည်ကလေးငယ်များအားဖုန်မှုန့်ဒဏ်ကိုကာကွယ်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဤထုတ်ကုန်၏စျေးကွက်သည်အလွန်ကြီးသည်.
01:13 25 ဇန်နဝါရီ 18
OMG ထွက်ပြေးပြီး Linii အချို့ရယူလိုက်ပါ။ သင့်ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏မှော်စွမ်းရည်ကိုလုံလောက်စွာမထောက်ခံနိုင်ပါ။ ! သူတို့နေဆဲဒီထုတ်ကုန်သည်မည်မျှကောင်းသောမယုံနိုငျပဲက၎င်း၏ကတခြား applications.Its အကြောင်းကိုသဘောသဘာဝဝှက်ထားသောဥစ္စာ၏အမှန်တကယ်တဦးတည်းငါအပ်နိုင်မည်ဆို home.Wish များအတွက်မဖြစ်မနေသင်ယူတာအရမ်းများနှင့်ယခုအကြီးအနံ့ပျောက်ကွယ်သွားပြီ 10 ကြယ်များ!!
07:57 08 Augဂုတ် 17